ज्वरो बिनाको ओमिक्रोन? - NA MediaNA Mediaज्वरो बिनाको ओमिक्रोन? - NA Media
पछिल्लो समय विश्वमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलने क्रम तीब्र छ। बिगतदेखि आजसम्म कोरोनामा मात्र होइन, त्यसको लक्षणहरुमा पनि उतार-चढाव हुने क्रम जारी देखिन्छ। कोरोना भाइरसको सुरुवाती समयतिर ज्वरो, खोकी र श्वास–प्रश्वासमा देखिने अवरोधलाई मुख्य लक्षणहरुको रुपमा लिइन्थ्यो। पछि स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने समस्याहरु पनि थपिएका थिए।
डेल्टाको लहरसम्म आइपुग्दा पनि यी तीन मुख्य लक्षणहरु निरन्तर देखिरहेका थिए। तर, ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिँदै जादा भने यी तीन क्लासिकल लक्षणहरु पछाडि पर्दै गएको विभिन्न अनुसन्धानहरु देखाएका छन्।
हालै बीबीसीले बेलायतमा गरिएको सर्भेलाई आधार मान्दै कसैलाई रुघाखोकी देखिए, त्यो ओमिक्रोन संक्रमण पनि हुनसक्ने समाचार प्रेषित गरेको थियो। वास्तमा यो बेलायतमा मात्र होइन, ओमिक्रोन संक्रमण देखिएका अरु देशहरुमा पनि यस्तै लक्षणहरु देखिएका विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाउँदछ।
बेलायतको 'जोए कोभिड अध्ययन समूह र किंग्स कलेज लण्डन'ले गरेको सर्भेका अनुसार ओमिक्रोन संक्रमितहरुमा सबैभन्दा बढी नाकबाट पानी बग्ने/बन्द हुने, टाउको दुख्ने, अत्यधिक थकान हुने, हाच्हिउँ आउने तथा घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरु देखिएका भनिएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाका चिकित्सकहरुको भनाइअनुसार जिउ दुख्ने, छाती दुख्ने, ढाड तथा जोर्नी दुख्ने, घाँटी दुख्ने, थकित हुने जस्ता लक्षणहरु ओमिक्रोन संक्रमितहरुमा देखिएका भनेका छन्। केही हप्ता अगाडि नर्वेमा भएको एक समारोहमा सम्मिलित सहभागीहरुबीच ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएको थियो।
प्रकाशित अनुसन्धान लेखका अनुसार सो समारोहमा संक्रमित भएकाहरुमा खोकी, नाकबाट पानी आउने/बन्द हुने, थकित हुने, घाँटी दुख्ने तथा टाउको दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षणहरु देखिएका थिए, तर ज्वरो भने प्रमुख लक्षणमा थिएन र झन्डै ५० प्रतिशतमा मात्र देखिएको थियो।
हालै अमेरिकाको सीडीसीले प्रकाशित गरेको अनुसन्धान लेखका अनुसार ओमिक्रोन संक्रमितहरुमा खोकी, थकान र नाकबाट पानी बग्ने/बन्द हुने जस्ता लक्षणहरु नै मुख्य थिए। नर्वे र अमेरिकी ओमिक्रोन संक्रमितहरु लगभग सबैले कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए। बेलायतमा पनि १२ बर्ष माथिका ८२ प्रतिशतले दुई मात्रा पूर्ण खोप लगाइसकेको तथ्यांक देखिन्छ।
सामान्यतय ज्वरो देखिए संक्रमण भएको शंका गरिन्छ। सुरुवातीतिर कोरोना भाइरस फैलिँदा ज्वरो मुख्य लक्षणको रुपमा लिने गरिन्थ्यो। तर, ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रादुर्भावसंगै हालसम्म ज्वरो मुख्य लक्षणको रुपमा भने देखिएको छैन। यस्तो लक्षणमा फरक देखिनुमा ओमिक्रोन भेरियन्टको जीनमा देखिएको भारी म्यूटेशन हो वा खोप लगाउनाले भन्ने स्पष्ट भने छैन। ज्वरो नदेखिए धेरै मानिसहरु सम्भवत कोरोना परिक्षण गर्ने छैनन्, र जसले गर्दा ओमिक्रोन भेरियन्टको यकिन तथ्यांक थाहा पाउन कठिन हुनेछ।
घुर्ने समस्या छ ? यसरी समाधान गर्नुहोस्